जीवनशैली Archives - visualnepal
बच्चालाई ज्वरो आयो भने के खुवाउने ? के नखुवाउने ?
sameer	 Nov 28, 2021 0
ज्वरो आउँदा शरीरको आवश्यक इनर्जी बढ्ने भएकाले साबिकको भन्दा बढि क्यालोरी खुवाउनुपर्ने हुन्छ । बालबालिकालाई डिहाइड्रेसन हुन नदिन सादा पानी, सुप, ग्लुकोज पानी, जुस, गेडागुडिको रस प्रशस्त खुवाउनुपर्छ । तारेको र तेलमा भुटेको चिल्लो खानेकुरा,…
जान्नुपर्ने कुरा : दैनिक काजु खाँदा यस्तो हुन्छ
काजुलाई ड्राइफुडको राजा भनिन्छ । काजु खानमा जति स्वादिलो हुन्छ, यो स्वास्थ्यका लागि पनि त्यतिकै लाभदायक पनि । काजुमा मैग्निसियम, कपर, आयरन, पोटासियम लगायतका तत्व भरपुर मात्रामा पाइन्छ । यी तत्वले हाम्रो शरीरलाई स्वस्थ राख्न मद्दत गर्छ ।…
शरीरको यी आठ भागमा कोठी छ भने तपाइँको हातमा पैसा टिक्दैन
शरीरका अलग अलग भागमा आउने कोठीको फरक फरक अर्थ हुन्छ । ज्योतिष शास्त्रका अनुसार शरीरका केही यस्ता भागमा कोठीआएमा पैसा नटिक्ने विश्वास छ । थाहापाउनुस् शरीरका यी ८ अंगमा कोठी आएमा पैसा नटिक्ने सम्भावना बढी रहन्छ । बायाँ गालामा कोठी बायाँ…
सपनामा सर्प देखा पर्छ भने बुझ्नु पर्दछ यी कुरा
सर्प सपनामा देखिनु को शंकेतहरु हे हुन भनि जान्न कठीन छ। अरु जनावरहरु झै सपनामा सर्प देखिनुको धेरै हुन सक्छ।सर्प यौन को संकेत हो। सर्पको सपनाले यौनशक्तिलाइ संकेत गर्दछ। यदि सर्प सपनामा आफुसँग बेरिन्छ वा कुनै शक्ति संचार गर्ने गरि काम गर्दछ…
पति पत्नीको एउटै राशि हुँदा शुभ हुन्छ कि अशुभ जान्नुहोस
sameer	 Nov 21, 2021 0
ज्योतिषमा कुल १२ राशि हुने गर्दछन्। सबै राशिको ग्रह स्वामी अलग अलग हुन्छन्। यिनैका आधारमा पनि मानिसको स्वभावका बारेमा धेरै कुरा थाहा पाउन सकिन्छ। जानिराखौँ यदी समान राशि हुने व्यक्तिले विवाह गर्दा उनीहरुको वैवाहिक जीवन कस्तो हुने गर्दछ।मेष…
शास्त्र भन्छ : महिलाले नगर्नु यी काम अनिष्ट हुन्छ ,धननाश हुन्छ
sameer	 Nov 19, 2021 0
एउटा राम्रो आचरण भएकी महिलाले घरलाई स्वर्गजस्तै बनाउन सक्छिन् । महिला घरकी लक्ष्मी हुन् । भनिन्छ एउटा त्यतिबेला घर जस्तो बन्छ जतिबेला त्यस घरमा बस्ने महिलाले आफ्नो कर्तव्य सम्झिएर त्यसको पालन गर्छन् । हरेक धर्ममा महिलाहरुको स्थान माथि…
सुन्दा सामान्य लाग्ने मकैका जुगाका यती धेरै फाईदा
मकै त हामी रहरले खान्छौँ तर मक्कैको सुत्ला भने हामी फ्याकिदिन्छौ । तर के तपाईलाई थाहा छ मकैको सुत्लाले धेरै रोगहरुबाट छुट्कारा पाउन सकिन्छ । मक्कैको सुत्लामा भिटामिन ए, बी र ई मिनरल्स र क्याल्शियम पर्याप्त मात्रामा पाइन्छ । प्रायःजसो…
यी कारण हुन्छ मिर्गौला फेल :
रोगबाट बच्ने एउटा महत्वपूर्ण तरिका स्वस्थ जीवनशैली हो । शरिरको स्वास्थ्य विग्रनुमा हामीले भाग्यलाई दोष दिन्छौ । तर कहिलेकाँही हामी अस्वस्थ जीवनशैली यापन गछौं । जसले हाम्रो आन्तरिक अंगहरुमा समेत नराम्रो असर गर्छ । शरिरको महत्वपूर्ण…
दुनियाँ जित्छन यी राशिका महिला :
शास्त्रका अनुसार फरक फरक मान्छे पछि मान्छेको स्वभाव पनि फरक फरक रहेको हुन्छ । विवाह पछि श्रीमान श्रीमतीको बिच कस्तो सम्बन्ध हुन्छ भन्ने चासो धेरैको मनमा रहेको हुन्छ । विवाह पछि कसै कसैको सम्बन्ध नटिक्ने, सम्बन्धमा फितलो आउने हुन्छ भने कसैको…
जान्नुहोस् : मन्दिरमा नरिवल चढाउदा हुन्छ यस्तो लाभ
भक्तजनहरुले मन्दिरमा सवैभन्दा बढी फूल चढाउँछन् । त्यसपछि नरिवलको प्रयोग बढी हुन्छ ।नरिवललाई संस्कृतमा नारिकेल भनिन्छ। श्रीफला पनि भनिन्छ जसको अर्थ हुन्छ ‘शुभ फल’। त्यसैले शुभ प्राप्तिका लागि शुभ फल चढाउने प्रचलन शुरु भएको धार्मिक विश्वास…